Page 11 – MySansar
खोप छैन, हल्ला बढी : डेनमार्कको १४ लाख, अमेरिकाको ५० लाख र बेलायतको २० लाख डोज हल्ला मात्रै
Posted on June 9, 2021 June 9, 2021 by Salokya
नेपाललाई अहिले कोभिड १९ विरुद्ध खोपको एकदम खाँचो छ। कोभिशिल्डको एक डोज लगाइसकेकाहरुले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन्। अग्रिम रकम भुक्तानी गरिसक्दा पनि भारतमा बनेको खोप नआउने भइसक्यो। अरु देशले प्रयोग नगरेका अस्ट्राजेनेकाको खोप पाए त्यो लाउन हुन्थ्यो। तर त्यो पनि आउने सुरसार छैन। तर हल्लामा भने ६४ लाख डोज खोप आइसक्यो। केही अघि मात्रै… Continue reading
भगवान संकट मै परेका हुन् त ?
हरेक वर्ष बडादशैंका अवसरमा तनहुँको बन्दीपुरमा अर्कै रौनक छाउँछ, अर्कै खुशीयालीको माहोल देखा पर्छ। बन्दीपुरस्थित खड्गदेवी मन्दिरमा कथित पानी चल्ने र नचल्ने जातजाती आपसमा मिलेर पूजापाठ गर्ने तथा सामुहिक–समावेशी तवरमा कल्याण मंगलको प्राथना गर्ने गर्छन्। मन्दिरको एउटै चुलोमा खाना खानेदेखि मन्दिरका चार कोणमा भिन्न जातीय पुजारीले खड्गदेवीको पुजा–आराधना गर्ने र नवमीका दिन खड्गदेवी तरवारलाई आलोपालो… Continue reading
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। आजै राति उनीहरुको राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण पनि भयो। यो विषयमा जानकारी दिन त्यहाँबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा नै गायब छ। विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधान बमोजिम’मात्र लेखिएको छ। संविधानको कुन चाहिँ धारा चाहिँ लेखिएको छैन। पहिले पहिले भए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा… Continue reading
अहिले महामारीको अवस्था के हो? संक्रमण दर साँच्चै घटिरहेको हो कि सरकारले परीक्षण घटाएको कारण घटेको जस्तो मात्र देखिएको हो? मान्छेहरु मात्र हैन, मिडिया पनि अन्यौलमा देखिन्छ। नेपाललाइभले आइतबार लेखेको समाचारको शीर्षक छ- पीसीआर परीक्षण दोब्बरले घटाएर संक्रमित कम देखाउँदै सरकार, संक्रमणदर अझै उच्च विन्दुमा त्यस्तै शिलापत्रले पनि ‘कोरोना संक्रमणको दर घटेको होइन, ल्याबहरूले परीक्षणको… Continue reading
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा एउटा प्यारोडी – हे बरै !
Posted on May 30, 2021 by mysansar
– उही कुमार लामा – मदनले सोध्लान् नि खोइ हिही भन्लान् कीर्तेलाई सोध भन्दिए। अनि फेरि सोध्लान् नि खोइ जबज भन्लान् काजुसँग खायो भन्दिए। आश्रितले सोध्लान् नि खोइ तुक्के भन्लान् नागरिकता बाँड्दैछ भन्दिए। मधेसीले सोध्लान् नि खोइ नागरिकता भन्लान् बिहारीले पाउँछन् भन्दिए। हिहीवालीले सोध्लिन् नि खोइ मेरो सरकार भन्लिन् बयलगाडा चढ्यो भन्दिए।
अनन्त गुणले सम्पन्न अनुत्तर सम्यक् सम्बोधी लाभ गरी मानव जगतलाई सत्यको मार्ग देखाउनु भएका भगवान् बुद्धको गुणानुस्मरण गर्ने र बुद्धोपदेशको अभ्यासलाई जनस्तरमा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपालमा मात्र होइन विश्वभरी बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आएको छ। वैशाख पूर्णिमा बुद्धको जन्म, बोधि लाभ र महापरिनिर्वाण गरी तीन संयोग परेको दिन भए पनि नेपालमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी परेको… Continue reading
म १२ दिन हराएँ। मोबाइल, इमेल, सोसल मिडिया मात्र होइन इन्टरनेटकै सम्पर्कबाट पनि आफूलाई विच्छेद गरेको थिएँ। त्यसैले देशविदेशमा के भएको थियो, मलाई केही पनि थाहा थिएन। माइसंसारलाई अमेरिकाबाट साथी कृष्ण ढुंगानाले अपडेट गरिरहेका थिए, म आफैभित्र संसार खोजिरहेको थिएँ। त्यसैले यो बीचमा भएका केही खबरहरु तपाईँहरुलाई बासी लाग्ला, मलाई चाहिँ ताजा लाग्यो। अन्तर्मनको यात्राबाट… Continue reading
प्रश्न : बुद्धका चार आर्यसत्यबारे थाहा छ?‬ ‪उत्तर : थाहा छैन‬ । ‪प्रश्न : बुद्धले बताएका अष्टांगिक मार्गबारे थाहा छ? ‬ ‪उत्तर : छैन ।‬ ‪प्रश्न : बुद्धले सिकाएको ज्ञान र ध्यानविधि थाहा छ?‬ ‪उत्तर: छैन ।‬ ‪प्रश्न : अनि के थाहा छ त? ‬ ‪उत्तर : बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल।‬ फेसबुकमा निकै सेयर… Continue reading
राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकमुखी शासकको आशमा १५ वर्ष अगाडि नेपालीले जनआन्दोल गरेथे। त्यो आन्दोलनपछि सत्ता, शक्ति र पदमा पुगेका दल, नेताले के काम गरे त्यो भन्नै परेन, सबै सार्वजनिक छ। राजा गए पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले शक्ति केन्द्रहरुसँग साँठगाँठ गरेर संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिए भनेर यतिबेला जनतामा आक्रोश चुलिँदोछ। र,… Continue reading
सरकारका अनुसार शुक्रबार कोभिड—१९ का कारण १७७ जना नेपालीले ज्यान गुमाए। अक्सिजन नपाएर कतिपय आफन्त र साथीभाइ विदा भए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १६ हजार १९२ छन्। ज्यान गुमाउनेहरू ६ हजार २४ भइसकेका छन्।’ यो महामारीबाट मान्छे जोगिन खोप नलगाई हुँदैन। संक्रमित बिरामी बचाउन अक्सिजन, औषधि, र… Continue reading
राज्य प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि चर्चामा छन्। आजको प्रसङ्ग नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेस गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १५३ सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै शीतल निवास पुगे। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच के सम्वाद… Continue reading
व्हील-चेयर को चिठ्ठी , पजेरो लाई !
Posted on May 20, 2021 by mysansar
आदरणीय दाजु , पजेरो ! धेरै धेरै सम्झना र नमस्कार ! म यहाँ रापिलो गर्मीका दिन हरुमा उपमहानगरपालिका ले निर्माण को नाम मा अब्यबस्थित तरिकाले भत्काएका खाल्डे सडक हरुको दुवै तर्फ ढालेका रुख हरु र जता-ततै मिल्काईएका ढुंगा-रोडा , बालुवा र माटोले पुरिएका डरलाग्दा बाटो हरुमा जसो-तसो घश्रीरहेको छु ! अनि हजुर को गाथ मा… Continue reading
बिहान बिहानै हजुरबाको देहान्त भएको खबर सहित घरबाट फोन आयो । म अत्यन्तै मर्माहत भएँ, युनि जान पनि मन लागेन । दिनभर घरमा बसेर हजुरबालाई स्मरण गर्न मन लाग्यो । जे जति समय उहाँ संग बिताएँ त्यो एकदम अबिस्मरणीय लाग्छ । उहाँ साच्चिकै आदर्शवान मान्छे लाग्दछ । ४ वर्ष अघि यताको अध्ययन भिसा पाउन भन्दा… Continue reading
के तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने र मिडियाले पनि तात्तातै कपिपेस्ट गर्ने खालका स्टायटस लेख्ने रवीन्द्र पाण्डेलाई मेडिकल डाक्टर ठान्नुभएको थियो? तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। किनभने उनी आफैले आफू मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएको खुलाएका छन्। माइसंसारले उनको बारेमा अस्ति एउटा ब्लग लेखेको थियो। त्यो खासमा उनीप्रति भन्दा पनि उनको स्टायटसलाई आँखा चिम्लेर कपिपेस्ट गर्ने मिडिया र… Continue reading